तिनै ओली चाहिन्छ - व्यंग्य - प्रकाशितः श्रावण १६, २०७६ - नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली धमाधम परिवर्तन हुँदै छ भन्ने अप्रिय समाचार आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूबाहेक अरूसँग पनि सल्लाह लिन थालेको, बालुवाटारबाहिरका पनि केहीलाई समेट्न खोजेको भन्ने हल्ला हावासरी फैलिइरहेको छ । पार्टीमा आँखो र खुर्सानीको सम्बन्ध भएका नेताहरू पनि बालुवाटार आवतजावत गर्न लागेका छन् अरे । प्रधानमन्त्रीले अब विपक्षीलाई पत्ताल पुग्ने गरी झटारो हान्न छाड्ने अरे । अबदेखि अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्ने अरे । यस्ता अफवाह फैलिइरहेका छन् बजारमा ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कुरा गर्दा अस्ति एक प्रसंगमा ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौँका जनताले मास्क लगाउन छाडे’ भनेको कुरालाई लिएर उनलाई सञ्चार माध्यम, सामाजिक सन्जाल, विपक्षी दल र आफ्नै दलका पनि विरोधी खेमाकाहरूले ठूलो होहल्ला मच्चाए । दुई सातासम्म सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, संसद्, सडक, पत्रपत्रिका, ट्वीटे, फेसबुके, भाइबरलाल सबका सब ताते, सक्रिय भए । प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्ना तिख्खर अभिव्यक्तिबाट निरन्तर मुलुकलाई हल्लाउँदै आएका छन् । समाजलाई तरंगित बनाउँदै आएका छन् । यो ओलीजीको मौलिक विशेषता हो ।
मानौँ, प्रधानमन्त्रीको शैली परिवर्तन भयो र उनले त्यो कुरालाई यसरी भनेमा के हुन्छ ? जस्तै, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि उपत्यकाका सडकमा धेरै सुधार आएको छ । गएको वर्षभन्दा यो वर्ष धूलो, हिलो र खाडल धेरै व्यवस्थापन गरिसक्यौँ । अब एक वर्षभित्र नागरिकले मास्क लगाउन नपर्ने गरी उपत्यकालाई सफा गर्ने योजनामा सरकार कटिबद्ध छ । भन्नजस्तो सजिलो गर्न नहुने रहेछ । विकास निर्माणका चरणमा धूलो, हिलो, फोहोर सहनुपर्दो रहेछ । यसबाट जनतामा पर्न गएको असुविधाप्रति सरकार क्षमाप्रार्थी छु ।’
प्रधानमन्त्रीले पोहोर साल चुच्चे रेलको कुरा गर्दा र पानीजहाजको टिकट काट्न आह्वान गर्दा कडा प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका थिए । यदि उनले अब परिवर्तित शैलीमा यसो भनेमा उनका पछि को लाग्छ ? जस्तै, ‘मैले ठट्टाको भावमा पानीजहाजको टिकट काट्न भनेकामा त्यसलाई वास्तविक ठानी जनताले खिल्ली उडाउनुलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । वास्तवमै हामी पानीजहाज ल्याउने प्रयत्नमा छौँ । नारायणी नदीमा केही महिनापछि सानो आकारको जहाज चल्दै छ । ठूला नदीहरूमा पनि जहाज चलाउन हामी दृढ संकल्पित छौँ । रेलका सम्बन्धमा जयनगर, जनकपुर, बर्दिबास रेल चल्ने दिन अब टाढा छैन । चीनबाट रेल ल्याउने विषयमा पनि काम अगाडि बढिरहेका छन् । कठिन भौगोलिक कारणले चीनबाट रेल ल्याउनु सजिलो छैन । तर पनि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । चुच्चे रेलको कुरा गरेर म अलि बहकिएछु । मेरै पालामा नभए पछिल्ला दस वर्षमा भए पनि हामीले चीनसँग रेलमार्ग जोड्नैपर्छ । यसमा प्रतिपक्षको पनि नैतिक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’
ओलीबाट यस्तो लुते भाषामा अभिव्यक्ति आयो भने हामी त ठाडै मुर्च्छा पर्छौं । ‘गल्ती भएछ’, ‘लज्जित भएँ’, ‘क्षमाप्रार्थी छु’ जस्ता निम्छरा कुरा गर्ने ओली हामीलाई के काम ! ओलीले यसरी बोले भने हामीले फेसबुकका भित्तामा के लेखेर भाइरल बनाउने ! पत्रपत्रिकाले यस्ता भनाइबाट के समाचार बनाउने ? त्यस्ता समाचार कसले पढ्ने ? त्यसकारण हामी सारा विपक्षीलाई निराश पार्ने गरी ओलीजीले शैली परिवर्तन नगरून् । हामीलाई पुरानै अररा र खरा ओली चाहिन्छ ।